कोरोना संक्रमण भएपछि सबैभन्दा पहिले कुन लक्षण देखिन्छ ? – Digital Khabar
कोरोना संक्रमण भएपछि सबैभन्दा पहिले कुन लक्षण देखिन्छ ?
१४ बैशाख, काठमाडौं ।
यस्तो छ लक्षणको क्रम
कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरले सारा विश्व तनावग्रस्त छ । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर भएदेखि यता धेरै अध्ययनहरू भइसकेका छन् र यसका लक्षणहरूको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
अध्ययनले कोरोना भाइरसले कसरी शरीरमा बिस्तारै आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा पुष्टी हुन्छ । कोरोना भाइरस निको हुन १४ दिन दिनसम्म समय लाग्छ जसलाई, इन्क्युबेशन पीरियड पनि भनिन्छ।
कोरोनाबाट संक्रमित भएको ८८ प्रतिशत मानिसहरूलाई पहिलो दिनमा ज्वरो र थकान महसुस हुन्छ। धेरै व्यक्तिलाई पहिलो दिनमा मांसपेशी दुख्ने र सुख्खा खोकी पनि लाग्छ। एउटा चिनियाँ अध्ययनका अनुसार करीव १० प्रतिशत मानिसहरूलाई पनि ज्वरो सँगसँगै पखाला वा वाकवाक् लाग्नसक्छ ।
दोस्रो देखि चौथो दिन
ज्वरो र घाँटी दुख्ने समस्या लगातार दोस्रो दिन देखि चौथो दिन लगातार रहन्छ।
कोरोनाभाइरसको पाँचौं दिनमा सास फेर्न कठिनाई महसुस हुन्छ । यो विशेष गरी वृद्ध वा पहिलेदेखि नै बिरामी मानिसहरूमा हुन्छ। यद्यपि भारतमा फैलिएको नयाँ लहरमा, कोरोनाका धेरै युवा बिरामीहरूलाई पनि सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ।
छैठौं दिनमा खोकी र ज्वरो रहिरहन्छ। केही व्यक्तिहरू छाती दुख्ने, दबाब र यस दिन देखि तनाव महसुस गर्दछन्।
सातौं दिनमा मानिसहरूमा गम्भीर छाती दुखाई र दबाव बढ्छ। सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। ओठ र अनुहार निलो हुन्छ। केही व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्छ। जहाँसम्म, कराेनाको हल्का र मध्यम लक्षण भएका व्यक्तिहरू सातौं दिनदेखि कम हुन थाल्छ। हल्का लक्षण भएका बिरामीहरूले यस दिनदेखि राम्रो महसुस गर्न थाल्छन्।
चीनको सीडीसीका अनुसार कारोना बिरामीहरूमध्ये १५ प्रतिशतले आठौं-नवौं दिनमा तीव्र श्वासप्रश्वासको समस्या सिन्ड्रोम महसुस गरे।
यस्तो अवस्थामा फोक्सोमा तरल पदार्थ बन्न थाल्छ र फोक्सोमा पर्याप्त हावा हुँदैन। यसको कारणले, रगतमा अक्सिजनको कमी हुन्छ।
सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र यदि अवस्था बिग्रन्छ भने, अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी आईसीयूमा भर्ना हुनुपर्छ।
त्यहि समयमा, यदि स्थिति अझ राम्रो भयो भने, बिरामीलाई दशौं दिनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिन्छ।
वुहान अध्ययनका अनुसार अधिकांश व्यक्तिलाई १२ औं दिनमा ज्वरो आउन रोकिन्छ । यद्यपि, केहि मानिसहरूमा अझै घाँटी दुख्ने समस्या भने रहिरहन्छ ।
सासको समस्या तेह्रौ/चौधौँ दिनमा कम हुन थाल्दछ ।
अध्ययन अनुसार लक्षणहरूको पहिलो दिनदेखि चौधौं दिनसम्म बिरामी संक्रमित हुन्छ र निको हुन्छ तर यदि १८ औँ दिनमा पनि बिरामीको अवस्था गम्भीर रह्यो भने यो चिन्ताको विषय हुन सक्छ।